Burcada internet-ka Nigeria oo cashar xanuun badan u dhigay nin Swedish ah, qiyaamay 300,000kr | Somaliska
Nin Swedish ah oo lagu magacaabo Makael ayaa cashar xanuun adag waxaa u dhigay burcada Internet-ka Nigeria ka dib markii ay isaga dhigeen in ay yihiin haweeney qurxoon oo Maraykanka u dhalatay. Mikael ayaa markii ay xaaskiisa kala tageen, isaga oo qalbi jabsan waxa uu iska diiwaan galiyay bogga Badoo oo ay ku wada xiriiraan dadka shukaansi doonka ah.
Halkaasi ayuu kula kulmay haweenay isku sheegtay in ay Maraykan tahay, iyadoo uu durbadiiba la dhacay. Dhowr maalmood ka dib ayay ka codsatay in uu u soo diro 100 Euro.
“Waxaan is dhahay lacag badan ma ahan, inkastoo aan ogahay in aysan habooneyn in arimahaas la sameeyo ” ayuu telefishinka SVT u sheegay Mikael.
Ka dibna waxaa soo kordhay codsiyada, iyadoo lacago kala duwan waydiisatay in uu u soo diro. Markii dambe waxay u sheegtay in ay joogto Istanbul oo ay dahab 83 kilo ay ka soo iibsatay oo hadda uga xayiran xafiiska canshuuraha, isla markaana ay u baahantahay 170.000 kr. Isagoo Mikael lacagtaasi ka soo deynsaday bankiga. Waxa uu sheegay in qofkaasi uu dareenkiisa si fiican uga faa’idaystay.
ilaa xiligaas wali lama uusan kulmin qofkaan Mikael, balse waxay ku balameen in xiliga Kirismaska ay imaan doonto Sweden isagoo iska xaadiriyay ayroboorka Arlanda balse cidma uma imaan. Xitaa tikitka isaga ayaa u diray oo qarashkiisa bixiyay. Maalintii ku xigtay ayuu helay email ay ku qorantahay in saaxiibtiis ay shil baabuur gashay oo ay hospitaalka ku jidho.
Waxaa loo soo diray sawir la soo farsameeyay oo muujinaya haweeney hospitaalka jiifta, kaasoo shaki ku dhaliyay Mikael, markii ugu dambeyntii uu baaritaan sameeyay ayay cadaatay in kombutarka laga soo diray emailka uu yaalo Nigeria oo cida uu u maleynayay in ay tahay haweenay Maraykan ah ay ahaayeen burcada caanka ah ee internet-ka ee ku nool Nigera.
Mikael ayaan rajo ka qabin ay lacagtii u soo noqoto, isagoo hadda ku jira deyn badan oo sanado ay ku qaadan doonto in uu iska bixiyo.
Taasi waa qisa xanuun badan balse waa cashir laga siiyay aaminada dag daga ahi ineeysan ficneen
wlhi waan kanaxay mikyeel wa arin xun mana fiicna in bini aadam ka looga faaiidey rabitaankooda mikyeel na wa nin daacad koley tuugada na Allaha oga gudo dhibkay u geysteen ninkan daacad iska ahaa
waan kaxumahay waxa ku dhacay mekal laakin waxa kasiidatan ma daawatan miiya dr phil shoow oo sogala shaanta galabnimo waxad ku arkaysa ismamo waayeela oo laga qatay lacag warkada iska daa xiita gawaadhiidi iyo sariirtii aay ku seexanaysay oo aay sartay maarkab qaarkale waxa laga qatay baalayiin dollar oo maalinkasta aay diirayan 2000 kun mar 50.00 kun marba wax aya laweeydisanaya ilaa aay garto maalayiin somalida wax ma dhaacdo waad yabaysa hadii ad daawato dr phil shoow
Siduu ku aaminay qof uusan arag halmar xataa waxee tahay kow mida labaad sheekada ineey tahay mid lacag lagu doonayo weey iska cadeed ee naga daaya sheekada qayaaliga ah fadlan
Boqorka riyada says:
Wa sheko KU cibrisho qado ah. Aniga laftigey gabar Somali SAS cml lacag ika KU daraday
ninka sidaasi lagu sameyey ma caafimaad qabaa mise waxbaa ka qaldan 100 ba la garaye xagee u wadaa 170 000 kr malaha waa iska ciyaarayaan. aniga ma qabo in uu qof caafimaad qabaa u waxas aqbalayo